Daahfurka Ol,olaha Talaalka Cudurka Jadeecada Iyo Adeegyada Gaarka ah ee Sahanka Cabirka Nafaqo- darada Oo Kafurmay Magaalada jigjiga - Cakaara News
Daahfurka Ol,olaha Talaalka Cudurka Jadeecada Iyo Adeegyada Gaarka ah ee Sahanka Cabirka Nafaqo- darada Oo Kafurmay Magaalada jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)Sabti 29ka July 2017. Waxaa maanta magaalada jigjiga ee xarunta DDSI kafurmay Shir lagu daahfurayay ololaha talaalka iskudhafka ah ee kahortaga cudurka jadeecada iyo waliba sahanka cabirka nafaqo darada kaasoo lagu talaalayo caruurta da’adoodu u dhaxayso 6 bilood ilaa iyo 15 sano.
Hadaba, daahfurkan ololaha talaalka ayaa waxaa kasooqaybgalay masuuliyiin heer deegaan ah, qaarkamid ah masuuliyiinta maamulka magaalada, culimo awdiin, hooyooyinka xaafadaha magaalada Jigjiga. Waxaana ugu horayntii kahadlay kusimaha wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI ahna Gadh/w G/S Qorshaynta Qiimaynta iyo Dabagalkan ee isla xafiiska mudane Maxamed Ayaanle oo sheegay in shirkan ujeedadiisu tahay daahfurka ololaha talaalka iskudhafka ah ee kahortaga cudurka jadeecada iyo adeegyada gaarka ah ee sahanka cabirka nafaqodarada. Wuxuuna intaa kudaray in talaalkan loogu talagalay caruurta da’doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa iyo 15 sano islamarkaana laga fulinayo 62 degmo oo deegaanka ah oo kakala tirsan 7 Gobol.
Sidookale, ololahan daahfurka ayaa waxaa isna kahadlay madaxa xafiiska maayorka MMJ mudane Cabdicasiis Maxamed oo sheegay in ololahani uu socon doono mudo 7 cisho ah. Wuxuuna kuladadaarmay dhamaan hooyooyinka caruurta ee xafadaha magaalada jigjiga in ay talaalka siiyaan caruurtooda.
Dhanka kale, culimo awdiinkii kasooqaybgalay ayaa iyguna sheegay in waalidku caruurtooda masuulka yihin islamarkaana ay caruurtooda geeyaan goobaha uu talaalku kasocdo.
Iskusoowada duuboo, ololahan talaalka oo kasocda 7 gobol oo deeganka ah ayaa lafilayaa in latalaalo caruur tirdoodu dhantahay 2 milion oo ilmood oo kunool DDSI.